သန်းခေါင်းစာရင်း | Open Development Myanmar
သန်းခေါင်းစာရင်း / လူဦးရေနှင့် သန်းခေါင်စာရင်း
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နှစ်ပေါင်း (၃၀) ကြာ ကောက်ယူနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့သော လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် တွင် ကောက်ယူခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေ နှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း ဖော်ပြချက်များအရ တိုင်းပြည်တွင် အမြဲတမ်းနေထိုင်သူ ၅၁.၄ သန်းကျော်ရှိရာ ထိုအထဲတွင် ကျား ၂၄.၈ သန်းကျော်နှင့် မ ၂၆.၆ သန်းကျော် ရှိကြောင်း သိရသည်။ 1 ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လူဦးရေဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းအများဆုံးရှိသည့် နိုင်ငံများမှာ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး၊ အရည်သွေးရှိသည့် ပညာရေးကို သင်ယူထားကာ ကောင်းမွန်သည့် အလုပ်အကိုင်များရရှိထားပြီး မှီခိုသူအချိုးလည်းနည်းသည့် ...
ကျောင်းမှ ပြန်လာသော ကျောင်းသားများ၊ တာချီလိတ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ။ Photo by United Nations Photo, via Flickr. Licensed under CC-BY-ND-2.0. လူဦးရေ၂၀၁၄ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအ၇ာ သန်းခေါင်စာရင်း အရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်း လူဦးရေမှာ ၅၁.၄၈ သန်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ လူဦးရေတွင် လုံခြုံရေးနှင့် အခြား အခြေအနေ များကြောင့် သန်းခေါင်စာရင်း မကောက်ယူနိုင်သည့် ဒေသ အချို့၏ ခန့်မှန်းလူဦးရေ (၁.၂) သန်း အပါအ၀င်ဖြစ်ပါသည်။ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရရှိသော လူဦးရေ စုစု ...